မိမိ Acc အား Log In ဝင်ထားသမျှနေရာအားလုံးမှ Log out လုပ်ခြင်း - Daily MM News
မိမိ Acc အား အခြားဖုန်းများထံတွင် Log in ဝင်ရောက်ထားပါက ပြန်လည် Log out လုပ်ခြင်း
မိမိရဲ့ Acc ကို ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် တခြားသူတွေရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Log in ဝင်လိုက်မိပြီဆိုပါတော့ဗျာ …
ကိုယ့်ကိစ္စလည်း ပြီးသွားရော Log out မလုပ်မိဘဲ ဒီအတိုင်း ပြန်လာလိုက်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီမှာဘဲ ကို Log in ဝင်ထားတဲ့ဖုန်းပိုင်ရှင်က ငြိမ်ငြိမ်မနေဘဲ ဟိုကြည့် ဒီကြည့် လုပ်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဂွမ်းပြီပေါ့ခင်ဗျာ …
ဥပမာ – Admin ဖုံးထားသမျှ… ကြူထားသမျှ …ဘူးပေါ်သလို ပေါ်တာကိုးခင်ဗျ … သူ့ဖုန်းကို ပြန်တောင်းပြီး Log out လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ပြန်မပေးတော့ ဘယ့်နှယ့်လုပ်မတုန်းခင်ဗျ ???
ကိုယ်ကလည်း မေ့နေရင် ပြီးပြီပေါ့ဗျာ ..
Acc ရထားတဲ့သူက မွှေလို့ ဘာပြောကောင်းမတုန်း …
ဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့ ..
အောက်မှာ နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ် …
တခြားနေရာမှာ Log in ဝင်ထားသမျှတွေကို တစ်ခါတည်း အပြီးပြန်ထွက်နိုင်မည့်နည်းလေးကို
ပုံလေးတွေအောက်မှာ စာလေးတွေပါတယ် ကြည့်လိုက်နော်…
Setting & Privacy ကို နှိပ်ပါ။
Setting ထဲကို ဝင်ပါ။
Security and Login ထဲကို ဝင်ပါ။
See More နှိပ်ပီး..
Log Out Of All Sessions ကိုရှာပီး နှိပ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် Log Out ကို နှိပ်လိုက်ပါက တခြားနေရာမှာ Log in ဝင်ထားသမျှတွေကို တစ်ခါတည်း အပြီးပြန်ထွက်နိုင်ပါပြီနော်..
အုန်းနို့မကြိုက်ပါက နို့ဆီ နို့စိမ်းဖြင့်သာလုပ်စားလို့ရပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ================ သာကူစေ့.. ၁၀သား သာကူချောင်း.( မျှော့ချောင်း)..၁၀သား ကျောက်ကျော…၂၅ဂရမ်..၁ထုပ် အုန်းနို့ ….ဗူးကြီး၁ဗူး 400ml သကြား….၅၀သားခန့် ဆားအနည်းငယ် Food Colour.. . မြေပဲလှော်…၁၀သားခန့် စပျစ်ခြောက်.. .၅ကျပ်သား ကျောက်ဖရုံယို.. ၅ကျပ်သား ပေသီး နို့ဆီ..၁လုံး နို့စိမ်း..၁လုံး ပင္ပြား ဆေးကုလာမ ပြုလုပ်နည်း ============= ပထမဦးစွာ .. ရေ ၁လီတာခွဲခန့်ထည့်၍ ဆူအောင်တည်ပြီး သာကူစေ့များကို ထည့်ပြုတ်တာအဆက်မပြတ်မွှေပေးပြီး သာကူမျက်စေ့ ပျောက်သည်ထိထားကာ ရေအေးဖြင့်ဆေး၍ ဇကာနဲ့ရေစစ်ကာထားပါ။ ရေစစ်ပါက..Food Colour ဖြင့်အရောင်ဆိုးထားပါ။ သာကူချောင်းကိုလဲ သာကူနည်းအတိုင်း ပြုတ်ထားပါ။ ကျောက်ကျောကို.. ရေ၁လီတာခန့်ထည့်၍ မီနစ်၂၀ခန့်ကျိုကာ …